झापामा नक्कली नागरिकताको बिगबिगी, जनप्रतिनिधि फरार « तपाईंको साझा इजलास
झापा । भारतसँग सीमा जोडिएको झापा जिल्लाबाट नक्कली नागरिकता लिने भारतीयहरुको बिगबिगी बढेको छ । पहाडे मूलका भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिने क्रम जिल्लामा बढेको छ ।
यही क्रममा एक भारतीय युवकलाई नेपाली नागरिकताको सिफारिस बनाइदिएको खुलेपछि झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्षसहित ९ जना फरार भएका छन् । प्रहरीले जनप्रतिनिधिविरुद्ध वारेन्ड काटेपछि वडा कार्यालयले गर्नुपर्ने दैनिक काम प्रभावित बनेको छ ।
मतदानको मसीले खुल्यो पोल !
तर, नागरिकता जारी गर्ने तर्खर हुँदै गर्दा एकजना कनिष्ठ कर्मचारीले भुपालको हातको नङमा मतदान गर्दा लगाइने मसी देखे, जसले उनलाई सोच्न बाध्य बनायो । ‘पारि निर्वाचन भएको दुईदिन मात्रै बितेको थियो । त्यसैले उहाँलाई शंका लागेछ’, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘त्यसपछि ती युवकलाई बोलाएर सोधपुछ थालियो ।’
त्यस क्रममा बमबहादुर र चन्द्रकलाले भुपाललाई नक्कली छोरा बनाएको खुल्यो । उनीहरु मात्र होइन, यो अपराधमा कचनकवल गाउँपालिका–२ का जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेत संलग्न देखिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि वडाध्यक्ष मेखबहादुर भट्टराईसहित सदस्य धनबहादुर गुरुङ, कर्मचारी हरिप्रसाद गौतम र खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ ।
१५ वैशाखमा अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर जनप्रतिनिधि, वडाका कर्मचारी र स्थानीय कविता गुरुङ, गंगा भट्टराई, प्रेमप्रसाद तिम्सिना, शिवकुमार दाहाल र तुलसीराम गुरुङको खोजीमा हाल प्रहरी जुटेको छ । झापाका डीएसपी महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पूर्जी जारी भइसकेका व्यक्तिको खोजी तीब्र पारिएको छ ।’ उनका अनुसार पक्राउ परेपछि मात्रै नागरिकता सिफारिसमा आर्थिक चलखेल थियो÷थिएन भन्ने खुल्नेछ । प्रहरी स्रोतका अनुसार भुपालले वयानका क्रममा आफूले गल्ती गरेको स्वीकारेका छन् ।
‘खुलेका बेला लिइराखौं भनेर लिएको हुँ’, गुरुङले प्रहरीलाई भनेका छन् ।’
आधार कार्डमा भुपालका पिताको नाम चन्द्रबहादुर गुरुङ उल्लेख छ भने झापाबाट लिएको सिफारिसमा कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर २ बस्ने बमबहादुर गुरुङको छोरा भूपाल गुरुङको मिति ०४० साल १० महिना ७ गते कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा जन्म भएको उल्लेख छ ।
अनलाइन खबरबाट साभार : https://www.onlinekhabar.com/2019/05/764498